VaTsvangirai Vanoshora Mhirizhonga Iri Kuitika Munyika
Gunyana 22, 2010
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti mafambisirwo akaitwa chirongwa chekubvunza vanhu zvavanoda kuti zvive mubumbiro idzva remitemo yenyika haaratidzi kuti veruzhunji vakataura zvavanoda kuti zvive mubumbiro iri.
Va Tsvangirai vati vatungamiri vemapato ari huhurumende yemubatanidzwa vachasangana nechimbichimbi kuti vaone kuti nyaya yekunyorwa kwebumbiro remitemo yofambiswa sei panodzoka mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, kubva ku America kwavari kupinda musangano we United Nations General Assembly kuti vaone kuti chirongwa ichi chofambiswa sei.
Mutungamiri wehurumende vatiwo bato ravo harisi kufadzwa nekushandiswa kwakaita masoja munyika yose pachirongwa chekubvunza vanhu zvavanoda kuti zvive mubumbiro remitemo.
VaTsvangirai vatiwo imwe nhengo yebato ravo, VaCrispen Mandizvidza, vakarohwa vakashaya neChitatu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF mushure memhirizhonga yakaitika muMbare mukupera kwesvondo. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Wayne Bvudzijena. Asi mashoko aVaTsvangirai atsinhirwawo nemutauriri webato ravo, VaNelson Chamisa, avo vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo kwanyanyisa pakatariswa kuti munyika mava nehurumende yakaumbwe nemapato matatu ari munyika muhurumende.
Kubvuma kwaita VaTsvangirai kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka kunochenura masangano anoshanda akazvimirira achitungamirwa nere National Constitutional Assembly ayo anoti vezvematongerwo enyika vaisafanira kutungamira chirongwa ichi.
Mune imwewo nyaya, Va Tsvangirai vaparura michina ichashandiswa nenhengo dzeparamende yakatengwa nesangano re United States Agency for International Development.
Michina yechimanjemanje iyi ichashandiswa mukutapa zvinenge zvichitaurwa nenhengo dzeparamende mudare iri iyi uye inobatsirawo veruzhinji kuti vakwanise kuwana ruzivo rwezvinenge zvichiitika muparamende zvisingavatorere nguva yakareba.